Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny sariitatry ny baolina kitra miaraka amin'ny anaram-bosotra hoe "Saint Max". Ny fitantaranay momba ny fahazazan'ny ankizy sy ny tantara momba ny fiainana momba ny fahazazana no mitondra anao fitantarana feno zava-nitranga lehibe hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy Fitiavan'i Allan Saint-Maximin. Credits sary: ​​ChronicleLive, 90Min, Twitter sy GetFootballNewsFrance
Eny, fantatry ny rehetra fa hafa ny Saint-Maximin, jacks ao anaty boaty izay manana haingany, fahaiza-manao ary fetsifetsy eny an-tsaha no manao mpankafy baolina kitra. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mihevitra ny Biography Allan Saint-Maximin izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Zavam-pianakaviana sy fiainana taloha
Manomboka ny anarana feno Allan Irénée Saint-Maximin. Teraka tamin'ny andro 12 faha 1997 tamin'ny reniny Nadège Saint-Maximin, ary rainy Alex Saint-Maximin tao Châtenay-Malabry, kaominina ao amin'ny tanàna atsimo andrefan'ny Paris, France.
Sahala amin'ireo rahalahiny namany; Thomas Lemar, Thierry Henry, Dimitri Payet ary Kingsley Coman, ny lehilahy Frantsay dia Ny foko Guianese Creole any Frantsa miaraka amin'i Carribean sy ny fianakaviana amerikanina atsimo. Na dia teraka tany Frantsa aza i Saint-Maximin dia avy amin'ny fianakavian'i Guyana (ilan'ny reniny) ary Guadeloupe (ilan'ny rainy).
Ny nahaterahan'ny ray aman-dreny manan-karena no nanome fiainana voalohany an'i Saint-Maximin. Nihalehibe izy tamin'ny fianakavian'ny fianakavianà ambony ary nahazo aina tsara izy tamin'ny mbola kely. Ny ray aman-drenin'i Allan Saint-Maximin dia nanana fanabeazana ara-bola tsara indrindra ary tsy niady vola akory. Fantatrao ve?… Ny reniny indray mandeha no nitana ny toeran'ny 'talen'ny fampianarana'tao amin'ny sekoly malaza iray hita any Paris Suburbs raha ny rainy dia Alex no miasa amin'ny mpitantana ny biraon'ny sampana Paris Diderot University any Paris, France. Samy nitaiza ny zanany hanaraka ny fivavahany ara-pinoana Kristiana izy roa.
Tany am-piandohana: Allan Saint-Maximin dia notezaina tamin'ny faratampony tamin'ny zaza telo. Manana zokiny iray antsoina hoe Kurtys sy rahavavy iray izay tsy fantatra ny anarany amin'ny fotoana nanoratana. Nihalehibe tao an-tanànan'i Meudon, ny tanora Saint-Maximin dia nanao dihy sy lamaody ho fialamboly. Io fomba maoderina amin'ny fiainana io dia nahita azy nitovitovy endrika ho an'ny lohany, fampandrosoana izay mbola nitohy hatramin'izao.
Tsy vaovao ny fitiavan'i Allan Saint-Maximin amin'ny vady. Ny sarin'ny fahazazany dia nilaza izany rehetra izany. bola: DailyMail
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Fanabeazana sy fanabeazana
Ny ray aman-drenin'i Saint-Maximin sy ny mpampianatra any an-tsekoly no nanome azy ny lanja rehetra ilaina mba hahatonga azy ho ambony kokoa rehefa mihalehibe. Tamin'izany fotoana izany, tamin'ny mbola kely, ny reny dia nomena 10 Euros i Allan isaky ny nandao ny tranony any an-tsekoly izy. Lany ny vola hividianana vatomamy sy ny hanohanany ireo namany sahirana (Famantarana ny fahalalany voalohany. Fony tany am-pianarana dia nahitana ny talenta Saint-Maximin amin'ny fanatanjahantena sy ny baolina kitra ary vao maika nitazona ny tenany izy tsy nanana mpanazatra na mpampianatra. Raha resaka teo dia hoy izy;
“Ny talenta dia tonga tamiko. Naka bola na aiza na aiza aho, tany am-pianarana, tao an-trano, sns. Dia nilalao baolina foana aho na dia tsy mpanazatra aza. Ny lalako manokana dia ny fomba niriako fotsiny. Ny haiziko sy ny fahaizako dia nampianarina ”
Anisan'ireo safidy ara-panatanjahantena rehetra, Fanatanjahantena izay tonga voalohany noho ny volany voajanahary fony izy mbola kely. Taty aoriana dia nampihatra ny Athletics to Football izy ary nanomboka niara-nilalao tamin'ny zokiny lahy, Kurtys izay efa tamin'izany fotoana izany dia naniry ho mpilalao baolina kitra izy. Tany am-piandohana, natoky ny fahaizany i Saint-Maximin, fampandrosoana iray izay nahatonga azy hino fa manana ny talenta izy handehanana ho matihanina.
Ny fanamarihana teo anilan'ny rahalahiny, ny iraka voalohany nataon'i Saint-Maximin dia nanjary nahalala ny fomba fanaovana zavatra mahavariana amin'ny baolina fandaka baolina. Nataony natao mba hiavian'ny olona rehetra ao amin'ny faritra manodidina azy izany rehetra izany, izay toerana voafetra ho an'ny baolina kitra. Andro antoandro, dia nanomboka nanome voninahitra ny fahaizany amin'ny fehin-trano sy ny ahitra ny lehilahy frantsay. I Saint-Maximin dia nilalao tamina zazalahy kely nandritra ny taonan'ny rahalahiny (roa na telo taona).
Ny hafainganam-pandeha miavaka nataon'i Saint-Maximin sy ny fahaizana mampihomehy dia nahita azy nihoatra noho ny an'ny ankizilahy hafa manodidina azy. Ny mpilalao baolina kitra an-dalambe izay tsy nisy nahita dia tsara vintana fa nahazo fotoana hiatrika fitsarana niaraka tamin'i Verrières-le-Buisson, fikambanana iray ao an-toerana- 34 min fiara sy 10.8km avy amin'ny fianakaviany. Tamin'ny fotoana samy mirahalahy (I Kurty no voalohany) nahomby tamin'ny fidirana ny oniversite, ny hafalian'i Saint-Maximin ny Tena tsy misy fetra mihitsy ny mpianakavy.
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Tamin'ny naha tanora azy dia nianatra ny varotra tao amin'ny klioban'ny tanora Verriere-le-Buisson i Saint-Maximin nandritra ny volana vitsivitsy talohan'ny nandrosoany tany amin'ny klioba hafa, US Ris-Orangis izay tohiny 55 min fiara / (34.5 km) avy any an-tranony ao Meudon. Tao amin'ny club dia nokarakarain'ny mpampianatra roa izy. Jean-Louis Lessard ary Didier Demonchy. I Saint-Maximin dia nilalao teo ambany fitarihan'ny mpampianatra Frédéric Ferreira tamin'ny taonan'ny 3 taona.
Araka ny andrasan'ny maro, dia nanomboka tsara tamin'ny asany izy. Saint-Maximin dia faly nijery noho ny fampisehoany tsy tapaka haingam-pandeha sy ny fahaiza-manao. Ity seho ity dia nahita azy nandroso tamin'ny akademika manana tanjona frantsay frantsay antsoina hoe ACBB (Athletic Club de Boulogne-Billancourt) tamin'ny taona 2007.
Tsy akademia fotsiny ny ACBB, fa marika ara-panatanjahantena izay tian'ireo ray aman-dreny rehetra ny hampiditra ny zanany. Izany dia satria nanana ny lazany ny akademia amin'ny famolavolana ireo mpilalao azy ho any amin'ny klioba frantsay. Hatem Ben Arfa, Yacine Bammou, hitana anarana fa vitsy no nandalo tao amin'ny klioba.
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Road to Fame
Rehefa lehibe i Saint-Maximin dia lehibe, nanomboka nanonofy izy hilalao ao amin'ny Premier League. Rehefa avy eo, nandeha hijery an'i Arsenal ny zazalahy frantsay Thierry Henry tontolo andro amin'ny fahitalavitra.
Niasa tamin'ny nofinofiny, ny kintana tanora dia nanohy nanao izay nataony tamin'ny fomba tsara indrindra teo amin'ny kianja filalaovana- maneho ny tenany amin'ny harenany sy ny sainy amin'ny fomba tsy manam-paharoa izy. Manazava ny maha-tokana azy eo amin'ireo mpifanaraka aminy, hoy i Saint-Maximin, indray mandeha;
“Ao amin'ny Akademia izy ireo dia manofana, misy rantsana tokana, roa sento. Hitan'ny olona rehetra fa lehibe aho. Nandeha be aho ary nasaina hilalao amin'ny zazalahy lehibe sy matanjaka kokoa. Nianatra ny fomba hikapoka azy ireo aho ary mandritra izany fotoana izany, ny aviod dia voapoka ”
Ny mpanazatra azy tamin'izany fotoana izany, Guillaume Sabatier, nanangana ny ekipany nanodidina azy. Tamin'ny lalao fifaninanana voalohany nataony, Allan Saint-Maximin dia nahatsapa fijery tamin'ny alàlan'ny baolina 8. Raha jerena ny toe-javatra iray tamin'ny fahazazany, dia nahazo laza lehibe teo amin'ireo mpiasa rehetra manerana an'i Frantsa. Tsy ela dia noraisin'i Saint-Maximin ny fanapahan-kevitra lehibe indrindra tamin'ny asany akademia tamin'ny fidirany tao Saint-Étienne, klioba iray izay nanome azy ny lalana azo antoka mankany amin'ny diplaoma amin'ny oniversite tamin'ny taona 2013.
At Saint-Étienne B, Saint-Maximin dia nanjary iray amin'ireo mpilalao matanjaka indrindra ao aminy, fampivoarana izay nahazoany ny fampiantsoana azy ho firenena nasionaly frantsay. Mampalahelo fa ny fandrosoana tao amin'ny ekipa zokiolona dia tsy nahita ny fahaizan'ny frantsay nahavita fotoana hilalaovana. Ny fifindran-toerana tany Monaco dia tsy niasa koa satria tsy afaka ny dabilio i Saint-Maximin Bernardo Silva, Antony Martial ary João Moutinho izay teo an-tampon ’ny fahefany.
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Mitsangàna mba ho ankizilahy
Mifindra amin'ny trosa mankany Fanatanjahantena Bastiais nanjary hetsika azo itokisana indrindra ho an'i Saint-Maximin, izay tsy nandoa fotsiny fa TSOTY mandresy lahatra an'i Nice hanao sonia azy avy any Monaco amin'ny fahavaratra amin'ny 2017.
Tao amin'ny Nice dia nanomboka nanao dingana lehibe i Saint-Maximin, lasa mpanafika lehibe ho an'ny klioba notarihin'i Patrick Viera. Ny fampisehoany ho an'ny klioba dia nanintona ny mpitantana an'i Newcastle United Bruce izay nitady olona hanaitra ny mpankafy azy, ka nahatonga azy ireo hiala eo amin'ny toerany.
Ny nofinofin'ny Premier League Saint-Maximin dia vita tanteraka taorian'ny nanatevenany an'i Newcastle tamin'ny 2nd tamin'ny Aogositra 2019. Avy hatrany dia tamin'ny vanim-potoana 2019 / 2020, ny mpilalao baolina kofehy zokiny miaraka amin'ny blondes miloko, ny diky ny spiky dia nanomboka mpankafy mahafinaritra. Saint-Maximin dia nahazo ny fon'ireo mpiaro ny Lalao Premier tamin'ny havoakan'izy ireo.
Allan Saint-Maximin dia lasa mpankafy indrindra tamin'ny vanim-potoanan'ny ligy voalohany. Sary: DailyMail
Fa isaky ny niaraka tamin'ny baolina i Saint-Maximin dia fantatrao izay hataony- mitodika, mihodina, mampivily, mihemotra, manelingelina ireo mpanohitra ary mitondra mandroso miaraka amin'ny baolina mipetaka amin'ny tongony. Ny fanakanana azy dia resaka iray manontolo raha jerena amin'ny sombin-tsarimihetsika etsy ambany.
Mijery ny video eto ambony dia hanaiky ianao fa i Saint-Maximin dia tsy misy isalasalana fa 'A JACK ' ao anaty boaty. Miaro ny fahaizany manaitaitra sy mamitaka (amin'ny felany mainty sy fotsy), ny angovo mahery fo dia manana angovo betsaka mila angovo mahasitrana ihany koa. Ity ambany ity ny porofo an-tsary.
Amin'ny fotoana nanoratana, tsy isalasalana i Saint-Maximin fa mpilalao manan-danja indrindra amin'ny ekipan'i Newcastle ary iray amin'ireo mpilalao mahaliana indrindra hijery ao amin'ny Ligy Premier. Tsy isalasalana fa ny mpankafy baolina kitra dia eny an-tsaha mahita tovolahy iray mamelana ho talenta sokajy eran-tany eo imason'izy ireo. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Relationship Life
Noho ny fiakaran'ny lazany dia azo antoka fa ny ankamaroan'ny mpankafy Newcastle dia tsy maintsy nisaintsaina raha nanambady tokoa i Allan Saint-Maximin ary mbola miaraka amin'ny vadiny na manana sipa. YES! Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny endriny mahafatifaty mifangaro amin'ny fomba fanaovany azy dia mametraka azy ao anaty lisitry ny lisitr'ireo tovovavy atao hoe wannabe.
Araka ny voalazan'i WTFoot, ilay Frantsay dia voalaza fa niaraka tamin'ny tovovavy iray antsoina hoe Margaux manodidina ny 2015, nandritra ny fotoana niarahany tamin'ny klioba Aleman (Hannover 96). Araka ny tatitra, i Margaux (sary etsy ambany) dia mitranga ny sakaizany taloha.
Allan Saint-Maximin indray dia voalaza fa efa nanambady an'i Margaux. Sary: WTFoot
Amin'ny fotoana anoratana, Allan Saint-Maximin dia voatahy manana zanaka vavy roa mahafinaritra (Lyana sy Ninhia) izay nantsoiny hoe Princesses. Raha jerena eto ambany dia ireo fakana volo amin'ny volon'ireo tovovavy dia taratry ny endrik'izy ireo sy ny endriny. An'i Lyana (ankavia) ary Ninhia (havanana) ankavanana eto an-tsary no misy sary an-tsary rehefa ankafizin'izy ireo ny fampiononana ankafizin'izy ireo.
Hihaona amin'ireo zanakavavin'i Allan Saint-Maximin- Lyana sy Ninhia. Sary: TheTimesUK
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao an'i Allan Saint-Maximin Fiainana manokana tsy lavitra ny gony sy ny fitaka eny ambonin'ny kianja dia hanampy anao hanana fomba fijery tsara kokoa ny toetrany.
Manomboka, eo tena bebe kokoa noho ny fahaizany, ny firavaka ary ny marika mpamorona izy. Eny !, mety hoheverinao fa maimaika fotsiny izy. fa Saint-Maximin dia olona matanjaka ary olona tsotra izay mahalala ny ataony; mametraka ny hafa ho eo alohany. Niresaka tamin'ny BBC, Saint-Maximin dia nampahafantatra an'izao tontolo izao ny faniriany ny hanao ny zava-drehetra eny ambony eny, mampientanentana ny mpankafy, ampio ireo mpiara-miasa hafa na dia tsy midika aza izany fa tsy manangona tanjona ianao. Ity ambany ity ny porofo an-tsary.
Nalaza iray volana taorian'ny nidirany an'i Newcastle, ny mpankafy Angletera Avaratra Atsinanana noho ny fitiavana dia namolavola ny fomba hivavahana amin'ny kintan'izy ireo - fampandrosoana izay niteraka ny hirany. Saint-Maximin dia manana hira malaza amin'ny anarany- izay hiraina fa tsy mandritra ny lalao fotsiny fa na aiza na aiza misy ireo klioba. Mihainoa azy eto ambany;
Ho an'ireo mpankafy maro, ny fananana mpilalao falifaly sy mahaliana toa an'i Saint-Maximin amin'ity taranaka ity dia zavatra tsara jerena. Izy dia tsy isalasalana fa olona iray mahafinaritra, izay tian'ny Newcastle ray aman-dreny izay tian'ny zanany haka tahaka ny zanany rehefa lehibe. Saint-Maximin dia nahazo fanajana be dia be avy amin'ireo mpankafy kely izay maro no nahatadidy ny hirany. mihira izany amin'ny fomba tsy misy diso.
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratan'i Allan Saint-Maximin dia efa nanamboatra ny ankohonany manokana ho amin'ny stardom ny fisaorana rehetra noho ny asany baolina kitra. Nanao ezaka tamim-pahatsorana ny ray aman-dreniny mba hialana amin'ny fampahalalam-baovao. Ny tsiambaratelon'ny vadiny, ny rahavaviny sy ny fianakaviany dia mbola mijanona ho miafina. Izy ireo dia mety manana fotoana tsara indrindra eo amin'ny fiainany noho ny hoe ny iray amin'izy ireo dia finoanoam-poana. Kurtys izay tsy nanao baolina kitra dia miasa ho mpanolotsaina amin'ny zandriny amin'izao fotoana izao.
Mahafaly an'i Saint-Maximin rehefa manome fiantrana ny sahirana ny fianakaviany. Fantatrao ve?… Ny iray amin'ireo zavatra voalohany nataony tamin'ny nahatongavany tao Tyneside dia ny fanekena ny fanasana ary ny NUFC Fans Food Bank- toerana izay taratry ny fahantrana izay mahatonga loza be any North East England. Nifantoka tanteraka tamin'ny zanany vavy ny ezaka haino aman-jery; Lyana sy Ninhia nandritra ny fanomezana nataony.
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Lifestyle
Ny hahafantaranao ny fomba fiainana Allan Saint-Maximin dia hanampy anao hahazo sary feno momba ny fomba fiainany.
Mahazo manodidina ny € 2,000,000 herintaona miaraka amin'ny karama € 38.462 (amin'ny fotoana nanoratana) dia azo antoka fa mahatonga azy ho mpilalao baolina kitra an'arivony- Famantarana ny fomba fiaina marevaka. Ilay mpilalao baolina kitra mahay dia mankafy ny fomba fiaina mamirapiratra mora voamarika amin'izany sedan manitra, izay mitentina $ 151,600 (ny karamany amin'ny herinandro roa sy tapany).
Fiara Allan Saint-Maximin
Eo amin'ny lafiny fiainana koa, you ary fantatro fa Saint-Maximin dia manana dikany lehibe amin'ny fomba lamaody arak'izay hita ao amin'ny lalao filalaovana. The Lehilahy frantsay dia mpivadika lamaody, izay tiana ny mijery tsara sy miserana eny ambony kianja. Araka ny tsikaritra nandritra ny fahazazany, ny endrika mpamorona (indrindra fa ny saron-doha) dia ny endrika famantarana azy hatramin'ny fahazazany.
Allan Saint-Maximin Lifestyle dia tsy nanomboka androany. Sary: Instagram
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Untold Facts
Nolazaina fa hosaronany ny Sticker Designers an'ny Headband: Fantatrao ve?… Ny kintan'ny Newcastle Allan Saint-Maximin dia noterena handrakotra ny lohany £ 180 Gucci miaraka amin'ny STICKER nandritra ny fandresena an'i Manchester United mba hialana amin'ny fandikana lalàna mifehy ny fanampiana. Nandritra izany fotoana izany, ny mpilalao mahay mamitaka dia tsy maintsy mametraka kasety fotsy eo ambonin'ny logo Gucci.
Allan Saint-Maximin dia voatery manarona ny lohan'i Gucci £ 180 £ rehefa milalao eny an-dàlana izy. Sary: Ny masoandro
Tatoavan'i Allan Saint-Maximin ho an'ny mpankafy: manana Ny tatoazy superhero dia tsy natao ho an'ny mpankafy marim-pototra. Ny endrik'i Allan Saint-Maximin dia nahita azy nahazo toerana mpankafy superhero. Ireo mpankafy matotra toy izao (eto ambany) dia tsy manadino ny hampahafantatra ny fitiavan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanaovana tombokavatsa ny tavany amin'ny vatany.
Ahoana ny azy Tahaka ny mahazatra isan'andro: Allan Saint-Maximin dia olona iray izay mampiasa paikady tokana Workout tokana hahazoana sy hijanona tsara endrika. Ny mpilalao baolina kitra mpanaingo dia mampiasa fomba tsy marim-pototra amin'ny fanaovana asa-fivarotana. Saint-Maximin dia aleony miverina ary manamafy ny diany ho fomba manokana hanohizany ny tenany.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Allan Saint-Maximin Childhood Story Plus Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
Joao Moutinho Tantara Mitantara Ny Zavakanto Ao Anaty Tantara An-tsary
Djibril Sidibe Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra